Museum Reina Sofía | Vaovao momba ny dia
Miaraka amin'ny Muse Prado sy ny Thyssen-Bornemisza Museum, ny Reina Sofía Museum dia mamorona ilay antsoina hoe telozoro kanto ao Madrid. Telo amin'ireo galeriana lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao izay mitahiry sangan'asa hosodoko amin'ny vanim-potoana samihafa amin'ny tantara.
Niorina tamin'ny 1992, ny Reina Sofía Museum dia manolotra mpitsidika fanangonana zava-kanto kanto Espaniola ankehitriny ary manohy ireo fotoana izay tsy rakotry ny Tranombakoka Prado, nanomboka nampiranty ireo asa tamin'ny taona 1881, taona nahaterahan'ilay mpanakanto Pablo Picasso.
1 Trano Reina Sofía
2 Ny niandohan'ny tranombakoka
4 Fitsidihana zava-kanto ankehitriny
5 Fanangonana Telefónica ao amin'ny Reina Sofía
7 Vidiny tapakila
Trano Reina Sofía
Asan'ny mpanao mari-trano Francisco Sabatini, ity tranombakoka ity dia ao amin'ny Old General Hospital of Madrid, izay nitarin'i Jean Nouvel taona vitsivitsy lasa izay tamin'ny alàlan'ny tranobe maoderina iray misy canopy vita amin'ny aliminioma sy zinc lehibe izay misy trano fitehirizam-boky. sy ireo efitrano fampirantiana vaovao.
Ao amin'ny Retiro Park, ny Reina Sofía Museum dia manana toerana roa ao an-tanàna: ny lapan'i Velázquez sy ny Crystal Palace, izay fampirantiana vonjimaika.
Ny Museum Reina Sofía dia mizara ho trano roa fantatra amin'ny anarana hoe Sabatini sy Nouvel, miampy toerana fampirantiana roa ao amin'ny Retiro Park: ny Crystal Palace sy ny Velázquez Palace izay misy fampirantiana vonjimaika.
Ny niandohan'ny tranombakoka
Tamin'ny voalohany dia ny fampirantiana fampirantiana vonjimaika no tanjona, fa taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hamadika azy io ho tranombokim-panjakana, hanao azy ho Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ny toerany vaovao ho tranombakoka nasionaly dia nanjary politika mavitrika amin'ny fividianana sy fampindramam-bola, miaraka amin'ny tanjona hanomezana repertoire matanjaka ny zavakanto Espaniola mifandraika amin'ny onjam-kanto iraisam-pirenena.
Na dia natomboka tamin'ny fampirantiana ireo sanganasan'ny mpanakanto tamin'ny taonjato faha-XNUMX taorian'i Francisco de Goya, dia natambatra nandritra ny taona maro ireo sary hosodoko an'ny taonjato faha-XNUMX, izay nanjary nalaza tao amin'ny tranombakoka ary namoaka ny sary hosodoko tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Ny tranombakoka Reina Sofía dia manolotra hosodoko hosodoko hosodoko marobe toy ny Pablo Picasso, Salvador Dalí ary Joan Miró ny mpitsidika. Ny sary hosodoko fanta-daza indrindra ao amin'ny tranombakoka dia ny Guernica an'i Picasso, natao ho fahatsiarovana ny daroka baomba an'habakabaka nataon'ny tanàna Basque nandritra ny ady an-trano.
Raha hitsidika ny tranombakoka dia mila ora maro ny mpankafy zavakanto maoderina satria tena malalaka tokoa ny tranombakoka. Ny liana dia mila eo anelanelan'ny adiny iray sy roa mba hitsidihana ireo ampahany manan-danja indrindra sy hahitana ireo sanganasa lehibe.
Fitsidihana zava-kanto ankehitriny
Ny zotra fitetezana ny tantaran'ny zavakanto espaniola ankehitriny dia mizara ho sehatra telo samy hafa: "Ny fahatapahan'ny taonjato faha-1900: utopias sy conflicts (1945-1945)", "Tapitra ve ny ady? Art ho an'ny tontolo mizarazara (1968-1962) "sy" Avy amin'ny fikomiana ka hatramin'ny postmodernity (1982-XNUMX) ".
Eto isika dia afaka mahita ny asa malaza indrindra ao amin'ny galeriana: El Guernica avy amin'i Picasso. Nasehon'ny governemantan'ny Repoblika tao amin'ny International Exposition tany Paris tamin'ny 1937, ity rindrina ity dia maneho ny alahelo vokarin'ny fanapoahana baomba an'i Guernica tamin'ny volana aprily tamin'io taona io ihany.
Fanangonana Telefónica ao amin'ny Reina Sofía
Nanomboka ny volana novambra 2017, ny fanangonana Cubist an'ny Fundación Telefónica dia nampiana tamin'ny fanangonana aseho ao amin'ny Museo Reina Sofía. Amin'ny alalàn'ity fampirantiana ity dia ahafahantsika mianatra momba ireo taona afovoan'ny Cubism sy ireo folo taona manaraka.
Alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy: manomboka amin'ny 10:00 maraina ka hatramin'ny 18:00 hariva ka hatramin'ny 21:00 alina (miankina amin'ny fotoan'ny taona).
Alahady: manomboka amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 19:00 hariva (mety miovaova).
Nikatona ny talata.
Fidirana ankapobeny: 10 €. Raha mividy an-tserasera € 8 ianao.
Mpianatra latsaky ny 25 taona, karatry ny tanora ary latsaky ny 18 taona: fidirana maimaim-poana.
Toy ny Prado Museum, azonao atao koa ny mividy tapakila manan-kery mandritra ny roa andro, ny vidiny dia 15 €.
Fidirana maimaim-poana: Alatsinainy manomboka amin'ny 19:00 hariva ka hatramin'ny 21:00 alina, Alarobia ka hatramin'ny Asabotsy manomboka amin'ny 19:00 ka hatramin'ny 21:00 alina ary ny Alahady manomboka amin'ny 13 ora sy sasany ka hatramin'ny 30:19 hariva.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Museum Reina Sofia